China XZWD Precision Solar tracking Slewing drive SE5 fekitori uye vagadziri | Wanda
XZWD Precision Solar yekutevera Slewing drive SE5
1. Yakakomberedzwa dzimba slewing drive Precision giredhi IP65.
2.Slewing drive inogona kuenderana akasiyana mota (AC, DC, Hydraulic)
3. Tine SE Series, WEA Series, Imwe honye uye Dual worm.
Iyo slewing dhiraivha iri giya bhokisi iro rinogona kuchengetedza zvakachengetedzeka nehuremu uye axial mitoro, pamwe nekufambisa torque yekutenderera. Iko kutenderera kunogona kuve mune imwechete axis,
kana mumatafura akawanda pamwechete. Zvidhori zveslewing zvinogadzirwa nekugadzira gearing, mabheyaringi, zvisimbiso, dzimba, mota nezvimwe zvinobatsira
uye kuvaunganidza mubhokisi rakapedzwa. Iyo inotyaira mota inoshandisa chaiyo kinematics kupa hukuru hukuru hweiyo imwechete-danho gearing.
Mabheyari uye magiya akaunganidzwa kuita diki, inozvimiririra, uye yakagadzirira-kuisa-kesi yekuwedzera uremu nekuita.
Izvi zvigadzirwa zvinoshanduka-shanduka zvakare zvine yakasimba kutyisidzira kuramba, kushanda kwehupenyu hwakareba, kutenderera kwakatsetseka, kutakura dziviriro uye yakasimbiswa mota sarudzo.
Semunhu ane ruzivo akauraya dhiraivha mugadziri, isu tinokwanisa kupa yemhando yepamusoro yakauraya madhiraivha.
1.Professional chigadzirwa dhizaini uye mutoro calcalation;
2.Made ine zvemhando yepamusoro zvigadzirwa kuti uve nechokwadi chemamishini zvivakwa
3.Total mhando manejimendi kubva kune zvinhu, zvigadzirwa zvekugadzira kusvika kugadzirwa chigadzirwa
4.Continuous kugadzirisa kwesimba rakazara, 2 mafekitori ari kushanda uye 1 fekitori iri kuvakwa nevashandi vanopfuura 230, ichipa slewing mabheyari 5000sets / mwedzi, slewing inotyaira 1000sets / mwedzi.
5.Strong technical uye R & D kugona pamwe neruzivo ruzivo timu uye nekudyidzana neChina University yeMining uye Technology, Northwestern Polytechnical University uye Tsinghua University.
6.Rich ruzivo rwekunze, zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi matanhatu nenharaunda.
7.Professional nokutengesa yomumvura slewing kubereka.
Pashure: Wanda Double Row Bhora Slewing Mhete Kubereka Kunze Kwemazino Kuzeya Kubereka Kutenderedzwa Turntable Kupa
Zvadaro: XZWD Solar Kuchengeta Yakapoteredzwa Dzimba SE7 Slewing Drive
Diki Slewing Dhiraivha
Solar Tracker Slewing Dhiraivha
Worm Dhiraivha Slew Mhete Kubereka
slewing dhiraivha yezuva tracker ine 24V DC mota